Ifafaale cimilo aad u xun oo kaa yaabin doonta | Saadaasha Shabakadda
Dhulkeenna waxaa ka jira dhacdooyin cimilo aad u daran oo taariikhda ku galay. Roobab mahiigaan ah, duufaanno, duufaanno, tsunamis, iwm Dabeecadu waligeed ma joojinayso inay naga yaabiso oo ay ina tusto xoogga iyo rabshadaha ay yeelan karto. Sawirada roobka iyo masiibooyinka dabiiciga ah waa waxa aan maanta ku arki doonno qoraalkan.
Haddii aad rabto inaad ogaato waxa ugu xun ee dhacay ee ka dhacay meeraha, sii wad aqrinta 🙂
1 Dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran
2 Qabow hoos u dhaca Levante-ka Spain
3 Tornado Alley oo ku taal Mareykanka
4 Monsoon ee Hindiya
5 Meesha ugu wadista badan adduunka, lamadegaanka Atacama
6 Duufaannada barafka ee harooyinka waaweyn ee Mareykanka
7 Inta badan duufaano arxan daran iyo duufaano
8 Dabaylaha Katabatic iyo qabow baraf ah
9 Duufaan Ciideed oo ka jirta Saxaraha iyo Mareykanka
Dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran
Dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran waa kuwa ka sii xoog badan marka loo eego sida caadiga ah. Si kale haddii loo dhigo, duufaan leh qayb aad u sarreeya ayaa loo tixgeliyaa inay tahay dhacdo saadaasha hawada oo aad u daran. Markay taasi dhacdo, guud ahaan, nasiib-darrooyinka ayaa dhaca oo ka dhasha saamaynta ay ku leeyihiin noolaha. Dheeraad ah, si dhab ah u saameeya nidaamyada deegaanka dabiiciga ah iyo alaabta wax ka soo baxda.
Marka xigta waxaan arki doonnaa liistada dhacdooyinka saadaasha hawada ee aadka u ba'an ee ka dhacay meeraha.
Qabow hoos u dhaca Levante-ka Spain
Xaaladani waxay dhacday markii qabow baaxad leh ay isku dhaceen dabaylo xagga bari ah oo qoyaanku ka buuxsamay badda Mediterranean-ka. Badda Mediterranean-ka way ka kululayd xilligii dayrta, ka dib markii ay kuleylka oo dhan ka aruursadeen kuleylka kuleylka badan. Sidaa darteed, way dhacday mid ka mid ah ifafaalaha ugu daran ee dalkeena.
Waxaa jiray roobab mahiigaan ah oo noocan ah, oo sababay daadad meelo badan. Roobabka la sheegay waxay ahaayeen kuwo aad u heer sarreysa oo aad u adag muddo ka dib.
Tornado Alley oo ku taal Mareykanka
Mareykanka waa aag juquraafi ahaan halkaasoo duufaannada si joogto ah ugu dhacaan. Dhacdooyinkaani waxay awood u leeyihiin inay baabi'iyaan wax kasta oo jidkooda ku jira, laakiin iyaga oo aan waxyeello weyn u geysan dhismooyinka ku dhow. Si ka duwan duufaan waxyeelleysa wax kasta oo la arko, gacan ka hadalka waxqabadka duufaannada ayaa ka yar.
Kuwa ugaarsadayaasha duufaannada ee u heellan inay si qoto dheer u bartaan, duufaanta 'Alley' waxay ahayd mid ka mid ah kuwa aadka loo doonayo. Waxay ka dhacday gobollada Texas, Oklahoma, Arkansas iyo gobollada kale ee Midwest. Duufaan caadi ahaan waxay leedahay oo keliya heerka dhimashada 2%. Si kastaba ha noqotee, sanad walba waxaa jira dhimashooyin fara badan oo ku kacaya kharashka waxyeelada ay geysato iyo burburintiisa
Monsoon ee Hindiya
Hindiya waa aag ay xilliga xagaaga iyo gu'ga u badan yihiin. Dhamaadka bisha Maajo, hawada hada socota ee loo yaqaan jet ee ka dhacda lakabyada sare ee jawiga, waxay ka timaadaa dhanka galbeed waxayna mas'uul ka tahay habeynta heerkulka dhulka bannaan ee Ganges inta lagu jiro xilliga qaboobaha. Xilligan xaadirka ah wuxuu si aad ah u burburayaa dhammaadka Maajo wuxuuna u dhaqaaqayaa koonfurta dhanka Bengal ka dibna mar kale ayuu ku soo laabanayaa. Tani waxay sababtaa roobab culus Himalayas ka dibna Galbeed, iyagoo ku faafaya dalka oo dhan.
Dhacdadan waxaa loo kala saari karaa inay tahay hargab qabow, laakiin aagga ay saameyneyso ayaa aad uga ballaaran. Dhibcaha qabow badanaa waxay saameeyaan meelo cayiman, maadaama ay yihiin roobab isdaba joog ah, waxay maareeyaan inay keenaan daadad halis ah iyadoo ay ka dhalanayso alaab maadi ah.
Meesha ugu wadista badan adduunka, lamadegaanka Atacama
On podium of lamadegaanka ugu kulul dunida, waxaad ka heli doontaa Lamadegaanka Atacama. Waxaa la ogyahay in lamadegaanka roobabku aad u yaryihiin heerkulkuna aad u sarreeyo maalintii oo aad u hooseeya habeenkii.
Si kastaba ha ahaatee, oo keliya 0,1 mm roobab sanadkii, waa lamadegaanka Atacama. Cimilada lamadegaankan waxaa lagu gartaa shucaaca cadceeda ee xoogan ee loo gaysanayo iyo hawo habeenkii ah oo shucaaca infrared ka baxa dusha sare. Dhacdooyinkaas awgood, farqi weyn ayaa u dhexeeya maalinta iyo heerkulka habeenkii.
Xaqiiqda ah in roobabku aad u yaryihiin, aaggan horumarka dhirta ayaan macquul ahayn.
Duufaannada barafka ee harooyinka waaweyn ee Mareykanka
Dabaylaha xoogga leh ee ku yimaada heerkul aad u hooseeya oo ka yimaada woqooyiga waxaa ku raran huur markii Harooyinka waaweyni dhaafaan. Markay isku dhacaan xeebta koowaad ee koonfurta, waxay sababaan mid ka mid ah ifafaalaha ugu halista badan meeraha, duufaannada barafka.
Qiyaas hawo ay ku raran tahay huur, oo leh heerkul aad u hooseeya oo dhibcaha biyaha ee laga helo cufnaanta hawada ay barafoobeen. Markay duufaantan barafka dhacaan, kaabayaasha dhaqaalaha si xun ayaa loo waxyeeleeyaa, gaar ahaan fiilada shabakada korontada. Barafku wuxuu dhigayaa kaabayaasha dhaqaalaha marwalbana wuxuu urursanayaa culeys weyn. Khadadka korontada waxay ku baxaan culeyska hoostiisa iyadoo koronto la'aan ay ka dhacdo meelo badan.
Inta badan duufaano arxan daran iyo duufaano
Duufaannada iyo duufaannada waa dhacdooyin daran oo dabiici ah iyo maahan xooggeeda, laakiin waa cabirkeeda iyo awoodeeda inay waxyeello u geysato. Duufaannada iyo duufaannada ugu caansan illaa iyo hadda waa kuwa ka dhacay Gacanka Mexico, Cuba, Haiti, Dominican Republic, Florida, Mexico, Central America, Mareykanka, Badda Caribbean iyo Aasiya (Taiwan, Japan iyo Shiinaha).
Duufaan waxay qaadi kartaa ilaa tobanaan duufaano, sidaas darteed awooddeeda wax dumintu waa mid naxariis darro ah. Qaybta ugu halista badan ee duufaanku waa duufaanka. Taasi waa, tiir weyn oo biyo ah oo ay dabayshu waddo isla markaana awood u leh inay ku daadato xeebta markay duufaanku gasho qaaradda.
Haddii duufaantu gaarto dhulka mawjadduna ay hooseyso, heerka biyuhu wuxuu awood u leeyahay inuu koro ilaa lix mitir oo u dhow xeebta, taasoo ka dhalan karta hirarka ilaa 18 mitir sare. Sidaa darteed, duufaannada waxaa loo tixgeliyaa dhacdooyinka cimilada daran ee ugu waxyeelada badan.
Dabaylaha Katabatic iyo qabow baraf ah
Meesha ugu qabow adduunka oo dhan waa Vostok. Meeshan waxaa ka jira celcelis heer kul ah -60 digrii waana gaadhay diiwaan -89,3 digrii. Sidaa darteed, noloshu kuma horumari karto aaggan. Dabaylaha Katabatic waa dhacdo ka dhacda cimilada Antarctic. Kuwani waa dabaylo ay soo saaraan qaboojinta miisaanka hawadu markay la kulmaan barafka. Dabayluhu waxay la siman yihiin dhulka waxayna awood u leeyihiin inay gaaraan xawaare gaaraya ilaa 150km / saacaddii waxayna socotaa dhowr maalmood.
Duufaan Ciideed oo ka jirta Saxaraha iyo Mareykanka
Dabaylaha Dabaylaha waxay awoodaan inay yareeyaan muuqaalka xitaa in ka badan ceeryaanta. Tani waxay ka dhigeysaa gaadiidka iyo safarka mid aan macquul aheyn. Siigada ku jirta duufaanka sanduuqa ah ayaa socdaala kumanaan kiilomitir waxayna saameyn ku yeelataa koritaanka plankton ee galbeedka Badweynta Atlantik, maadaama ay tahay isha laga helo macdanta dhirtu ku yar tahay dhirta.
Waxaan rajaynayaa inaad layaab ku noqotay dhacdooyinka ay dabiicadu awood u leedahay inay na tusto. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in si wanaagsan loo ogaado halka aan u soconno, in la ogaado sida loogu dhaqmo dhacdooyinka noocan oo kale ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Ifafaale cimilo aad u xun oo kaa yaabin doona
Wanaagsan, boostada wanaagsan, runtii waan jeclahay ifafaalaha dabiiciga ah, waa wax lala yaabo. Qaybta xun ayaa ah saameynteeda iyo cawaaqibkeeda. Tusaale ahaan, qaraxyada limonic waxay u muuqdaan kuwo aan la dareemin, si isdaba joog ah uma dhacaan, laakiin cabbirka ay soo saarto wuxuu dili karaa kumanaan qof.
Boggeyga internetka waxaan ku leeyahay maqaal loogu talagalay dhacdooyinkan